Degso Wingsuit Simulator APK loogu talagalay Android
Degso Wingsuit Simulator
Bilaash Degso loogu talagalay Android (53.00 MB)
Degso Wingsuit Simulator,
Carling Dev, oo ka mid ah magacyada guulaha leh ee moobilka guurguura, ayaa nagu dhiirrigelinaya inaan la barbar -dhigno Wingsuit Simulator, oo ay lacag laaan ku daabacdo.
Ciyaarta, oo ay ku jiraan 5 dharka kala duwan, waxay leedahay garaafyo tayo sare leh iyo saamayn dhawaaq. Iyada oo leh Wingsuit Simulator, oo ka mid ah ciyaaraha isboortiga guur -guura oo si buuxda loo soo bandhigo oo lacag laaan ah, ciyaartoydu waxay ku kici doonaan cirka oo waxay adduunka ka hoos marin doonaan cagahooda. Anaga oo dhabarkayaga ku haysta boorsada baarashuudka, diyaaradu waxay noqon doontaa nin waxaanan la kulmi doonnaa daqiiqado ay ka buuxaan adrenaline.
Soosaarka, oo aan si dhakhso leh ula qabsan karno iyada oo ay ugu wacan tahay kontaroolada fudud, 10 hawlood oo kala duwan ayaa na sugaya. Hawlaha ka soo muuqan doona sahal ilaa dhib waxay ka bilaaban doonaan ka soo boodidda buuraha ugu sarreeya. Waxsoosaarka guulaystay, oo ay ku ciyaareen in ka badan 100 kun oo ciyaartoy, ayaa helay cusboonaysiintiisii ​​ugu dambaysay Oktoobar 24 -keedii.
Ciyaartoyda raba ayaa soo dejisan kara oo ku raaxeysan kara ciyaarta Google Play.
Waxaan idiin rajaynaynaa ciyaaro wanaagsan.
Wingsuit Simulator Noocyada
Cabirka Faylka: 53.00 MB
Horumar: Carling Dev
Top Eleven 2021, ciyaartii abaalmarinta ku guuleysatay ee maamulaha kubada cagta. Laga soo bilaabo...
Retro Goal waa ciyaar kubbadda cagta ah oo ay ku raaxeysan doonaan jiilka ku raaxeysta ciyaarista...
Dream League Soccer wuxuu ka mid yahay kuwa ugu badan ee la soo dejiyo oo lagu ciyaaro kubbadda...
Carling Dev, oo ka mid ah magacyada guulaha leh ee moobilka guurguura, ayaa nagu dhiirrigelinaya...
Ciyaaryahanka Kubadda Caraysan waa ciyaar kubbadda cagta guur -guura oo leh qaab aad uga duwan...
Mid ka mid ah magacyada guuleysta ee madal guur -guura, CBS Interactive, Inc. Wuxuu u soo bandhigay...
Waxaan ka qaybgeli doonnaa tartamada masraxa moobiilka oo leh Mega Ramp Stunts 2018. Mega Ramp...
CBS Interactive Inc, oo soo saarta ciyaaro isboorti oo aad u guuleysta madal guur -guura, waxay sii...
Waxaad heli doontaa qalab kalluumeysi oo lacag laaan ah isla markaasna ha seegin fursadda aad ku...